VELIRANON’NY FILOHAM-PIRENENA : Nirodorodo nanatanteraka fambolen-kazo ny antoko TGV
Ho fandraisana anjara amin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin’ny fandrakofana ala an’i Madagasikara dia nanatanteraka fambolen-kazo ny sabotsy teo teny Talatan’i Volonondry ny antoko TGV sy ireo fikambanana miara-dia aminy, ka anisan’izany ny CS ANR sy TMH. 16 février 2021
Vahoaka marobe no tonga teny an-toerana nanatanteraka izany adidy masina izany. Noporofoin’ny antoko TGV fa maro an’isa izy ireo ary tsy lany andro amin’ny fihantsiana ho amin’ny fankahalana sy fandrangitana adim-poko toy ny ataon’ny mpanohitra sasany izay tsy maty voalavo an-kibo ary mikasa hanongam-panjakana.
Tonga namita adidy masina izany ny mpikambana sasany eo anivon’ny governemanta, ny filohan’ny Antenimieran-doholona, ny solombavambahoaka, ny governoran’ny Faritra Analamanga sy tompon’ andraikitra ara-panjakana maro. Tsy teto Analamanga ihany no tonga nandray anjara tamin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny Filoham-pirenena izany fa nahitana ny avy any amin’ny Faritra hafa toy ny avy any Itasy, Vakinankaratra, sns. Adidy tsy an’olon-dratsy ary tsy naman’ny mpandrava fa mpanangana ny antoko TGV.